Ambongadiny seamless body shaper mpanamboatra | Akanjo Wanzhanxing
an-trano > Products > Shapewear > Bodyshaper
Ny mpanamboatra vatana dia akanjo izay atao ao anaty akanjo mba hamoronana illusion amin'ny vatana manify.
Lasa akanjo fototra ho an'ny vehivavy maoderina ny mpanamboatra vatana sexy. Na akanjo, akanjo fety, na akanjo ofisialy; ity akanjo contour ity dia afaka manova ny endrikao amin'ny indray mipi-maso.
Ny fametahana vatana tsy misy fangarony dia vita amin'ny nylon sy spandex mivelatra efatra, izy ireo dia lamba elastika, mahazo aina, malefaka ary malefaka.
Ny vehivavy mamorona seamless atin`akanjo curves mahafatifaty endrika, maina haingana, maivana sy tsy hita maso, tsara ho an`ny vanim-potoana rehetra.
WZX 2022 New Shapewear Mid-Fe Slimmmer Butt Lifter Bodysuit
Ity akanjom-behivavy mirindra Mid-Thigh ity dia mampiasa endrika asa tanana tsy misy tady 360° manokana, maivana sy mahazo aina, tsy misy taolana vy na tariby, tena mahazo aina ka saika hanadino fa manao cincher andilany ianao. Famolavolana vatana feno hanaovana eo ambanin'ny akanjo fampakaram-bady / jumpsuit / akanjo tery / zipo / pataloha jeans, tsy misy tsipika hita eo ambanin'ny akanjonao. Ny fanerena mafy sy ny fifehezana ny kibo, manome anao fiolahana malama kokoa.
Mpamatsy Shapewear an'ny vehivavy WZX Manara-penitra Vatana Manalefaka
Women Waist Trainer Full Body Shapewear Underbust Slimming Mid-fe Shaper Butt Lifter ShapewearIty mpanamboatra vatana manalefaka ity dia vita amin'ny lamba avo lenta, silky, malefaka ary malefaka, ny akanjo ambanin'ny corset leotards misy ny Nylon sy Spandex. Ity bodysuit mahazatra ity dia azo anaovana mandritra ny tontolo andro, mamolavola mora ny andilana sy andilana tonga lafatra, manome anao ny curve sexier malefaka kokoa manampy anao hijery tsara amin'ny akanjo / akanjo, ary hahatonga ny vatanao tsy ho mibontsina na mibontsina na mibontsina, mba hanana hourglass tsara tarehy. tarehimarika, manao manintona.
WZX Seamless Shapewear ho an'ny vehivavy mpamatsy bodysuit
Sokafy Bust Push Up Hoditra tery manatanjaka ny vodiny afovoany manangana Shapewear tsy manara-penitra Tady hoditra Control Shapewear BodysuitIty mpampiofana andilana ho an'ny vehivavy ity dia hi-waist misy lamba roa sosona manome fanerena ambony kokoa amin'ny vavony izay mifehy mora foana ny kibonao sy ny andilanao sady manatsara ny vodi-tongotrao. Ny akanjo fitafy ho an'ny vehivavy amin'ny hoditra dia hitondra anao amin'ny traikefa mifehy ny vatana. Ireo pataloha fohy fanamafisam-bozaka ireo dia afaka manampy amin'ny fanamafisana ny ambany sy hanandratra ny vozonao. Ny endrika fanerena ny feny dia miantoka fa tsy hihodinkodina midina na miakatra ity mpandidy midadasika ity. Ny endrika U-Shape sy ny andilany azo amboarina amin'ny akanjo feno vatana dia tsara amin'ny fanalefahana ny tsindry avy amin'ny soroka amin'ny alàlan'ny fanosehana ny nono ho amin'ny fijery mendri-piderana.
WZX Women Open-Bust Mid-Fe Shapewear mpamatsy
Akanjo hoditra ho an'ny vehivavy Sosona maivana Open-Bust Mid-Fe Ny akanjo bika dia tsy misy sisiny izay avy amin'ny teknolojia mirindra mba hahatonga ny vehivavy ho mahazo aina kokoa amin'ny fitafy, ny endrika manokana dia mamolavola ny afovoany, ny andilana, ny lamosina, ny andilana, ny lamosina ary ny feny mba hanasongadinana ny fiolahana voajanahary ho an'ny vehivavy. Bodysuit shaper lehibe hanaovana aorian'ny fitondrana vohoka, dia manolotra ny fanohanana sy ny famatrarana rehetra. Namboarina mba hanome endrika amin'ny fiankinan-doha amin'ny tontonana fanaraha-maso manetriketrika, avelao ny vehivavy hiverina amin'ny endriny voalohany.
WZX Shapewear Slim Body Shaper Firm Control Bodysuit Manufacturer
Butt Lifter Bodysuit Body Shaper Tummy Control Shapewear Thigh SlimVita amin'ny lamba avo lenta, misy nylon NILIT sy spandex, izay maivana sy mivelatra ary mazoto amin'ny hoditra. Ny faritry ny tratrany sy ny faritra ambany dia vita amin'ny akora mifoka rivotra, mora sy mahazo aina mandritra ny andro manontolo. Mety tsara aminao koa izy io noho ny elasticité ambony. Azonao atao ny manao azy na aiza na aiza miaraka amin'ny akanjo ivelany rehetra, toy ny short, blouse ambany, zipo, na akanjo lava lohalika. Mifanaraka amin'ny birao, akanjo isan'andro, torimaso, fety, sns.
WZX Women Seamless Bodysuit Mid-fe Slimmer Shapewear mpamatsy
Compression Garments ShapewearFifehezana kibo ho an'ny vehivavyBodysuit Slim Body ShaperNy bodysuit Mid-Thigh dia nanampy endri-pamokarana toy ny fofonaina, ny fandoroana ary ny fisondrotana, ary hanampy anao hahazo vatana fitaratra ora. Ny fatorana fanaraha-maso tsy hita maso dia manana tombony amin'ny fampiakarana ny ambany sy ny bust rehefa mampangotraka ny kibo, ny lamosina, ny andilana ary ny feny. Ny akanjon'ny vehivavy tsy hita maso miaraka amin'ny atin'akanjo rehetra. Izany no tonga lafatra smoothing, maivana sosona ampahany.
WZX Women's Seamless Shapewear Series Factory ODM OEM
Akanjo hoditra ho an'ny vehivavy Sosona maivana Open-Bust Mid-FeIty body shaper bodysuit ity dia novolavolaina miaraka amin'ny tontonana mamolavola mba hanamafisana ny kibonao. Ny endrika avo lenta dia mampihena ny andilana mamorona silhouette vehivavy malefaka kokoa. Ity akanjo mainty hoditra ity dia manana asa tanana 360 degre ary tsy mihodinkodina. Vokatr'izany, ny bikan'ny singa iray dia natao kanto tsy misy zipper na farango na maso eo amin'ny faritry ny kibonao, noho izany dia manome anao ny fiolahana milamina kokoa ary manampy anao ho tsara tarehy amin'ny akanjo!
WZX Women Seamless Wholesale Bodysuit Support Custom Made
Bodysuits ho an'ny vehivavy tsy misy traceandilanyV-neck Sexy Stretchy Leotards Jumpsuit Romper Seamless UnderwearAkora malefaka faran'ny kalitao avo lenta, mifoka rivotra, mora milentika, mihenjana ary mahazo aina amin'ny fotoam-pahavaratra mafana.Snap Closure: Jumpsuits ambany Tanga miaraka amin'ny fanakatonana bokotra snap.Kaopy voavolavola misy wiring zero. Tsy tianao ve ny tariby metaly sy plastika manapaka ao amin'ny tratranao avy amin'ny bodysuit nentim-paharazana? Ny kapoakanay dia novolavolaina mba hitazonana anao amin'ny toerany tsy misy ny fanosihosena sy fanosehana tariby mahazatra. Lamba misy sosona telo mba hitazonana ny fanananao rehetra amin'ny toerany. Tsy mila miahiahy momba ny fampisehoana be loatra ianao amin'ity akanjo maotina sy mampahazo aina ity izay manindrona anao sy mitazona ny zava-drehetra amin'ny toerany. Ny fehin-tsoroka azo amboarina dia mifamadika eo amin'ny toeran'ny hook 2 lamosina.
WZX Seamless Shapewear ho an'ny vehivavy Open-Bust Mid-Fe OEM ODM
Fitaovam-batana feno ho an'ny vehivavy Seamless Bodysuit Andilany Mpanazatra Tummy Control Fe Slimmer ShapewearIty bodysuit shapewear ity dia manana elasticité avo sy tsara bika amin'ny vatana, malefaka, mifoka rivotra, ary elastika miendrika 4, manalefaka nefa tsy mahazo aina. Ny tapany afovoany mivaingana sy mipetaka dia mahatonga ny vehivavy hahatsapa miharihary fa mihena ny andilana, mahazo aina ary mahagaga fa mifanentana tsara. Ny endri-javatra tsy misy sisiny dia tsy vitan'ny hoe tsy hita maso amin'ny akanjo rehetra tsy misy bulges ity shapewear ity fa mahazo aina kokoa rehefa mitafy. Fampidirana tsara amin'ny ankapobeny ho an'ny fanalefahana ny vavony, manao curve tsara tarehy.
Introto Vehivavy Karazana akanjo tsy misy seam Wanzhanxing
Wanzhanxing Apparel Introto Women isan-karazany Seamless Shapewear Wanzhanxing Apparel, 10 ＋ taona traikefa: 10 taona mahery traikefa amin'ny orinasa fanondranana.
Body Shaper ho an'ny vehivavy Open Bust Firm Triple Control Shapewear Underwear Bodysuit Plus Size Ity mpanamboatra vatana manalefaka ity dia vita amin'ny lamba malefaka, malefaka, malefaka ary malefaka, ny akanjo ambanin'ny corset leotards misy Nylon sy Spandex. Ny tampony vehivavy open-bust tsy misy tanany dia mora mamolavola ny andilana tonga lafatra sy ny fikotrokotroky ny andilana, manome anao fiolahana malefaka kokoa sy malefaka kokoa manampy anao ho tsara tarehy amin'ny akanjo/akanjo, ary hahatonga ny vatanao tsy ho mibontsina na mibontsina na mibontsina, mba hanana endrika ora tsara tarehy, manao manintona.
WZX Women Full Body Shapewear Seamless mpamatsy ambongadiny
Shapewear ho an'ny vehivavy indroa ny vavony fanaraha-maso Bodysuit andilany mpampiofana bozaka panties Full Body Shaper Fe SlimmerIty vest Open-Bust Mid -Thigh shapewear ity dia vita amin'ny lamba vita amin'ny Nylon + Spandex avo lenta, malefaka sy malefaka, maivana ary mifoka rivotra, malefaka ary maharitra, ary tsy mora ny mikorontana sy mihena rehefa voasasa. . Open bust design for body shaper ho an'ny vehivavy tummy firm for dress dia ahafahanao manao ny bra anao manokana. Ary koa, tsy misy taolana vy na tariby ao anatiny, tena mahazo aina sy mahasalama ny fitafy isan'andro.